Ukraine International Airlines inoshandisa drone-based scanning yekuongorora kwendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ukraine International Airlines inoshandisa drone-based scanning yekuongorora kwendege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ukrainian MRO kambani MAUtechnic, Ukraine International Airlines (UIA) uye Luftronix, Inc vakabatana vakaita drone-based scans yeUIA's Boeing 737-800 ndege muKyiv. Zvese zviyero zvakaitwa pachishandiswa Luftronix's tsika-yakavakirwa madroni neepamusoro-chaiyo masystem ekushambadzira uye yepamusoro-mhando scanning michina, uye iyo Luftronix Orchestrator software yekuronga scan, mashandiro eendege uye kuongororwa kwedata.
"Tinotarisa nguva dzose pahunhu hwekuchengetedza kwedu, kuchengetedzeka kwevatakurwi uye kushanda kwakakwana kwenzira dzese dzendege," anodaro Volodymyr Polishchuk, Quality Assurance Manager paMAUtechnic. Akawedzera kuti, "zvaikurudzira kuona timu yeLuftronix ichigovana tsika nemifungo yakafanana."
Izvo zviyero zvinovimbisa kugadzikana kwepasirese kugadziriswa uye zvishandiso zvinongoerekana zvayera kureba kubva kumusoro uye kukamurwa kwechinhu kubvumidza chaiyo pa - screen zviyero zvechero chigadzirwa. Izvi zvinobvumira vaongorori kuti vaongorore nekukasira kana izvo zvigadzirwa zviri mukati mezvakatemerwa mukuchengetedzwa kwendege nemanyorero ekugadzirisa. Pamusoro pezvo, zviyero zvinochengeterwa kuenzanisa nekufamba kwenguva zvichigonesa maitiro ekutarisisa chero chinhu chekugadzira chinoda kutariswa.
Luftronix's drones inotakura akawanda anodonha-kumashure masisitimu kuti ave nechokwadi chekuti hapana chimwe chishandiso chinokundikana chinogona kuuraya chinouraya mu-kutiza chiitiko. Chero chimbo chakakomba chakavakirwa-mukati redundancies. Pamusoro pezvo, madrones anoshanda akazvimiririra akavakira-munzvimbo dzekukurumidzira dzinozivikanwa dzekuchengetedza- mamiriro akakodzera uye anogona kupora kubva pazviitiko zvisingatarisirwe, semuenzaniso zvinhu zvekunze zvinofamba zvichipinda munzira yekubhururuka, manera kana tambo dzinoonekwa kwadzaisatarisirwa, kana mamwe madrones kupindira.
"Mushure memakore ekushanda masikati neusiku kuona kuchengetedzeka uye kunyatsogadzirwa kwemidziyo yedu yekuvheneka, tinoona kubatana kwedu neMaUtechnic neUIA sedanho rakakura pakuunza tekinoroji yedu kune indasitiri yendege," anodaro Klaus Sonnenleiter, Mutungamiri uye CEO kuLuftronix, uye akaenderera mberi, "tinoona uyu semukana wekuchengetedza mhedzisiro yekutarisisa kwega kwega, kuvaita kuti vaenzaniswe uye kuongororwa kwakaitwa nekukurumidza zvakanyanya uye nenzira yakajeka kupfuura zvazvaigona kare."
MAUtechnic iri kutarisira kudzikisa nguva yekuchinja kweyakajairika mamiriro ehurongwa hwendege kusvika pa50%, zvinoenderana nerudzi rwekutarisa, uye zvakare kushandisa tekinoroji mukuremerwa kuchengetedza kweakasiyana kesi yekushandisa mashandisiro. Iyo purojekiti yekubatana ichaenderera ichiongorora ndege nekutsvaga nzira inoshanda kwazvo yekuongorora ndege nekukurumidza uye nekuvimbika.